Jôsia (mpanjakan' i Jodà) - Wikipedia
Jôsia (mpanjakan' i Jodà)
(tonga teto avy amin'ny Josia (mpanjakan'i Jodà))
I Jôsia na Jôsiasa dia mpajaka faha-16 tao amin' ny Fanjakan' i Jodà nandimby an' i Amôna. Nanjaka tamin' ny taona 639 hatramin' ny 609 tal. J.K. nahafaty azy atao Megidô tamin' ny ady nifanaovany tamin' ny farao Nekô II. Izy no rain'ny mpajakan' i Jodà telolahy izay nandimby azy, dia i Jôahaza sy i Jôiakima (na Jôakima) ary i Zedekia. Niara-belona taminy ny mpaminany Zefania (na Sôfônia) ary natao hoe Davida vaovao.
Nitomany i Josia rehefa novakina taminy ny Bokin'ny Lalàna - nataon'i Julius Schnorr von Carolsfeld - taona 1858.
Araka ny Boky faharoan' ny Mpanjaka dia nandidy ny hanarenana ny fahasimban' ny Tempolin' i Sôlômôna i Jôsia tamin' ny faha-18 taona nitondrany. Tamin' izany no nilazan'ny mpisoronabe Helkia (na Helkiasa) fa nahita ny Bokin' ny Lalàna tao an-tempoly (2Mpanj. 22.8). Rehefa avy novakina ilay boky dia nitomany i Jôsia ka naniraka haka hevitra amin' Andriamanitra satria heveriny fa tsy nanaraka ny lalàn' Andriamanitra hatry ny ela ny fanjakàny.
Niteny tamin' ny mpaminanivavy atao hoe Holda ireo mpanompon' i Jôsia. Nanambara io mpaminany io fa manameloka ny Fanjakan' i Jodà Andriamanitra nefa tsy hahita izay loza izany i Jôsia izay niverina nanaraka ny Lalàna. Nasain' i Jôsia novakina tamasom-bahoaka tao an-tempoly ilay boky ary nampamongoriny ireo fanompoam-pivavahana izay nifanohitra amin' ny Lalàn' i Iahveh teo amin'ny fanjakàny. Narodany ny sarin-tsampy sy ireo fitoerana fanompoam-pivavahana ary nofoanany ireo mpisoron' izany fivavahana izany. Izany no atao hoe "fanavaozam-pivavahan' i Jôsia". Nopotehiny ny ombilahy kely volamena naorin' i Jerôbôama I mpanjakan' i Israely tao Betela telonjato taona lasa izay. Nandidy ny vahoakany hankalaza ny firavoravoan' ny Pesah (Paska jiosy) ka tamin' ny fomba farany izay tsara izay tsy nisy hatramin' ny vanimpotoan' ny mpitsara no nanatanterahana izany.
Ny nahafatesan'ny mpanjaka Josia, nataon'i Francesco Conti
Milaza ny Baiboly fa i Joôia no mpanjaka faran'izay sarotiny tamin'ny fanarahana ny Lalàn' i Mosesy (na lalàn' i Moizy). Tsy ampy hifandanja amin' ny fanaovan' i Manase, mpanjakan' i Jodà sady raibeny, tsinontsinona an' i Iahveh Andriamanitr' i Israely anefa izany.
Tamin' ny ady nifanaovan' ny tafik' i Jodà tamin' ny farao Nekao II dia maty tao Megidô i Jôsia ka nentina tany Jerosalema ary nalevina ao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jôsia_(mpanjakan%27_i_Jodà)&oldid=1042043"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 12:18
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 12:18 ity pejy ity.